Jacques mpikambana, no nitarika ny AG Electif an’ny ligin’ny baolina kitra any Bongolava ka nifidianana izay ho filohany sy ho mpikambana ao amin’ny komitim-panatanterak’izany ligy izany, araka ny tolo-kevitry ny FIFA, tany Tsiroanomandidy renivohitry ny Faritra omaly alarobia 10 jolay 2019. Seksiona 2 mandrafitra ity ligy ity hatrany no nandatsa-bato tamin’ireo fifidianana roa ireo. Taorianan’ny fifidianana dia namoaka ny didy lah. 15/CN/19 Rtoa Atallah Beatrice izay nanambara fa : « Lany ho filoha vaovaon’ny ligin’ny baolina kitra any Bongolava Atoa Rakotonirina Mamonjisoa tamin’ny antsapaka natao rehefa nahazo isa nitovy 1-1 hatrany izy sy ny mpifanandrina taminy, Dr Rakotoarimino Andrianina Désiré nandritra ny latsa-bato in-3 miantoana nataon’ireo mpifidy mirahalahy. Ny vadin-tany nanatrika ny fifidianana no nandray ny vato natao antsapaka tamin’ny farany. Nambaran-dRtoa Atallah Beatrice koa fa lany ho mpikambana ao amin’ny komitim-panatanterak’ity ligy ity Atoa isany : Rafenoanjara Haridinasoa Elie, Ramanantoanina Andriasy, Randrianirinarivo Andrianimelson ary Razafimandimby Narivelo. Nifamihana am-pahibemaso ny kandida roa tonta ary nilaza tsy hametraka fitarainana ny resy dia i Dr Désiré fa niarahaba ny filoha vaovao ary nilaza ho vonona hifanampy hampandroso ny kitra any Bongolava. Izy koa dia efa nametraka ny maha-kandida CE FMF azy teny Isoraka. Afaka mandatsa-bato amin’ny fifidianana filohan’ny FMF sy CE FMF ho tontosaina any Toliara amin’ny 24 aogositra 2019 izao sy manolotra olona ho fidiana izany izao ny ligin’i Bongolava.